Dịrị gị Samsung Galaxy S5 nwere ọtụtụ uru n'ihi na ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-eche ihe na-erite uru i nwere ike na-enweta site ọma dịrị gị Galaxy S5, ebe a bụ ihe dịrị nwere ike ime ka gị Samsung ekwentị.
Dịrị-enye gị ohere wụnye Custom Iweghachite, Custom ROM, ndụ na Mods.
Echichi nke ọrụ ndị a ga-ekwe ka ị ga-esi kasị nke gị Galaxy S5
Ha na-ekwe ka ị na mbo mbuli arụmọrụ nke gị Galaxy S5.
Ị ga-enwekwa ike mfe wụnye ngwa ọdịnala si Google Play Store nke na-achọ na i nwere mgbọrọgwụ ohere tupu echefu ihe ọ bụla nke ọdịnaya na ụlọ ahịa.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na e nwere ọtụtụ ihe na ị ga-mkpa ịmụta iji ọma kwụsịrị gị Samsung Galaxy S5. Otu n'ime ndị a na-eleghị anya ndị kasị mkpa nke ndị a bụ na ị ga-mkpa mbụ niile ndabere ọdịnaya ekwentị gị. Dabara nke ọma gị, ị pụrụ ime nke a nnọọ mfe iji Wondershare MobileGo nanị otu click. Ka anyị hụ otú ime otú ahụ.
Back gị Data iji Wondershare MobileGo
Ị ga-akpa nke nile mkpa ibudata na wụnye Wondershare MobileGo software na kọmputa gị. Ozugbo ọ ebudatara, ugbu a unu bụ njikere malite usoro nke akwado gị Samsung Galaxy S5.
Nzọụkwụ 1: Gbaa Wondershare MobileGo na mgbe ahụ jikọọ gị Samsung Galaxy S5 gị na kọmputa na iji eriri cables. The software kwesịrị ịghọta na ekwentị gị. Nke a pụtara na ị ga-ahụ aha na i kenyere ngwaọrụ gị egosi na n'ụlọ ihuenyo.
Nzọụkwụ 2: Na isi window, pịa "One-click ndabere" ka malitere.
Nzọụkwụ 3: Ị ga-ahụ nkwado ndabere na mpaghara window egosi. Na nke a window nile nke ọdịnaya na ekwentị gị na ike ga-kwadoo ga-ahọrọ na-akpaghị aka. Ọ bụrụ na ị chọrọ ndabere ihe niile na ekwentị gị, mgbe ahụ, na-ahapụ ihe niile enyocha ka ọ bụ. Ma, uncheck igbe na ọdịnaya ị na-achọghị ka ndabere up.Step 2: Na isi window, pịa "One-click ndabere" ka malitere.
Nzọụkwụ 4: The nzọụkwụ ọzọ na-agụnye ị na-ahọrọ a faịlụ ụzọ maka ndabere faịlụ. Wondershare Ga-ahọrọ ịzọpụta faịlụ a na nchekwa aha C: / Ọrụ / Administrator / My Documents / Wondershare / MobileGo / ndabere. Ọ bụrụ na ị enwe obi ụtọ na nke a ụzọ wee pịa ndabere mezue ndabere usoro. Ọ bụrụ na, Pịa na-agagharị na mgbe ahụ họrọ a họọrọ ọnọdụ. Pịa na ndabere mgbe mere.
Ọ dị mkpa na ị na-ekwentị ejikọrọ n'oge dum usoro.
Ugbu a, na gị data bụ n'enweghị kwadoo na nwere ike weghachiri eweghachi na oge obula, ọ bụ oge kwụsịrị ị Samsung Galaxy S5. -Esonụ bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị ewu ewu na ụzọ ime otú ahụ. Anyị depụtara ndị kasị mma otú i nwere ike họrọ onye na kasị mma suut gị mkpa.
The Popular Ụzọ mgbọrọgwụ Samsung Galaxy S5
1. abụọ ụzọ na-arụ ọrụ nke ọma
Isiokwu a na-enye a doro anya nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu na-esi mgbọrọgwụ gị Galaxy S5. N'adịghị ka ndị ọzọ na ị ga-ahụ online, ọ bụghị ihe na-edochaghị anya ma ọ bụ kọrọ ọmụma. Ọ ga-enye gị abụọ ụzọ ya bụ CMW Nkpọrọgwụ usoro-CF Auto mgbọrọgwụ Method. Ma ndị a ụzọ na-ọma kọwara n'isiokwu na otú ị ga-ahụ na ha mfe iji mejuputa na mgbọrọgwụ gị Samsung Galaxy S5 nnọọ mfe.
Ngwá Ọrụ: Odin, Philz Touch CWM mgbake na SuperSU.
Review: ma ndị a ụzọ ndị dị irè. Ma ihe, isiokwu ka ukwuu simplified ụzọ ndị dị otú ahụ na ị nwere ike mejuputa edinam nzọụkwụ dị ka ị na-agụ ha. Isiokwu ọbụna na-aga dị ka na-aza ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị ị pụrụ inwe na ụzọ. Dị nnọọ-akwadebe maka ogologo Gụọ, na eleghị anya na-apụghị nyeere dị ka ma ụzọ bụ ntakịrị metụtara.
2. mgbọrọgwụ Your Samsung Galaxy S5 na 20 sekọnd
Isiokwu a bụ ihe ọzọ na onye ukwu. Ọ na-enye unu na-a nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu na-esi kwụsịrị gị Galaxy S5 na-erughị 20 sekọnd (ha na-azọrọ, ọ bụghị nke anyị).
Ngwá Ọrụ: Towelroot
Review: Ozugbo ị ga-esi nzọụkwụ, ọ bụ ihe dị mfe na-agụ na kwesịrị mfe mejuputa. The video bụ ihe na-adọrọ adọrọ mgbakwunye maka ndị ga-kama-aga site na hassle nke ịgụ niile nzọụkwụ.
3. dịrị Galaxy S5 on Android 4.2.2 KitKat
Isiokwu a na-enye a nkuzi na isi na-elekwasị anya na iji CF-Nchekwa onwe-Nkpọrọgwụ ngwugwu na Odin. Ị ga-adị mfe na-agụ nkuzi na mfe iso nzọụkwụ ndị na-dịkwa nnọọ mfe mejuputa.
Ngwá Ọrụ: CF-Nchekwa onwe-Nkpọrọgwụ ngwugwu
Review: Ọ bụ a pụtara mfe ịgụ isiokwu na-enye a usoro na dị mfe iji mejuputa na na-na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụ ihe dị mfe Gụọ na ọ dịghị-afụ ụfụ na ọ na-abịa site ikike saịtị.
4. Olee ka mfe kwụsịrị Samsung Galaxy S5
Isiokwu a na-aga n'ime zuru ezu na otú ka ojiji nke CF-Nchekwa onwe-Nkpọrọgwụ ngwugwu kwụsịrị Samsung Galaxy S5. Ọ na-enye mfe iso nzọụkwụ na kwesịrị ime ka ọ dị nnọọ mfe na-eme ka dịrị ịga nke ọma.
Review: ịbụ a na-ewu ewu Gaa website n'ihi na ọtụtụ technology nsogbu, Laptopmag ka simplified a nkuzi na-eme ka ọ dị mfe maka onye ọ bụla na-eso mfe.
5. ụzọ dị mfe iji kwụsịrị Samsung Galaxy S5
N'agbanyeghị eziokwu na ọ bụ a ukwuu zuru ezu isiokwu, ọ na-enye usoro iji kwụsịrị gị Galaxy S5 na ị nwere ike nke ọma chọta nnọọ uru.
Review: Ọ bụghị ihe dị mfe n'isiokwu na-agụ dị ka ọ bụ nnọọ zuru ezu ma ọ na-ọrụ mere na ị ga-amụta ọtụtụ ihe si na ya dị ka mma.
> Resource> Android> Olee otú Iji mgbọrọgwụ Samsung Galaxy S5 na Otu Click